Dad badan oo ku dhintay dagaalkii Xeraale |
Dad badan oo ku dhintay dagaalkii Xeraale
Ugu yaraan 8 qof ayaa ku dhintay in kabadan tiradaasina dhaawacyo ayaa ka soo gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad shacab ah oo degaanka ku sugnaa sida ay xaqiijiyeen Saraakiisha Caafimaadka iyo dadka degaanka.
Dagaalka ayaa goordhow istaagay kadib markii ay labada dhinac muddo dagaalamayn mana jirto ilaa cid kala dhax-gashay dhinacyada halkaasi isku laaynaya. Odayaasha degaanka ayaa ku baaqay in colaadda la joojiyo waxayna eedeyn usoo jeediyeen maamulkii Ahlusunna ee ku biiray Galmudug.
Wali waxaa taagan xiisad dagaal oo u dhaxaysa dhinacyadii dagaalamay oo ku wada sugan gudaha degaanka iyo duleedkiisa. Dad badan oo shacab ah ayaa ka bilaabay in ay ka barakacaan degaanka Xeraale kadib markii ay u dul qaadan waayeen rasaasta iyo hub kale oo culus oo ay isu adeegsanayaan labada dhinac.